အာလူးလာမပေးနဲ့ လေကိုနဲနဲလျှော့…Potatoes | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » အာလူးလာမပေးနဲ့ လေကိုနဲနဲလျှော့…Potatoes
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 12, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Myanma News, News, South East Asia | 10 comments
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုဝင်ဘာလက ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ တခုမှ မဖြစ်သေးဘူးလို့ မကြာသေးခင်ကမှ လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီအပတ်တွင်းမှာ ထုတ်လွှင့်မဲ့ အသံလွှင့်ချက်တခုတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။ “အခုထိတော့ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ ပြောင်းလဲမှုမျိုး တခုမှ မတွေ့ရသေးဘူး” လို့ ဂျာမန် DW-TV တီဗွီသတင်းဌာနနဲ့ ဘာလင်မြို့အခြေဆိုက် Hertie အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုကျောင်းသားများကို တယ်လီဖုံး ပေါ်မှ အင်္ဂါနေ့က ပြောသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲတော့ ကျင်းပခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် တက်လာတဲ့ အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ခင်က ရှိထားတဲ့ လူတွေအတိုင်းပါပဲ… စစ်မှန်တဲ့ အပြောင်းအလဲ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေရဆဲပါ”။ အသက် ၆၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်အတွင်း အချိန်အများစုကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝနဲ့ ကုန်လွန်ခဲ့ရပြီး နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ပြန်လည် လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ မဲလိမ်လည် မသမာမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်လို့ စွတ်စွဲခံထားရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာ သူမကို လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
တိုင်းပြည်ကို ရာစုနှစ်တဝက်နီးပါး အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရသည် မတ်လအတွင်းက သူတို့အဆို အရပ်သားအစိုးရ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို သံလက်သီးပမာ ပြင်းထန်လှတဲ့ ချုပ်ကိုင်များနဲ့ ၁၉နှစ်ကြာ အုပ်ချုပ်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေဟာ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မှ အနားယူခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သောလတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေဖြစ်သူ ဦးမြင့်ကို သမတ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်သည်။
ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းသည် အာဏာကို တင်းကျပ်စွာ ချုပ်ကိုင်ထားဆဲဖြစ်သည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်မှုကြောင့် ပိတ်ပင်ထားပြီး လေ့လာသူအများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်နိုင်အောင် တမင်ရည်ရွယ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ “နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ မလွတ်မြောက်သ၍၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်ခွင့်မရသ၍ စစ်မှန်တဲ့ အပြောင်းအလဲလို့ မယူဆကြောင်း သူမက တီဗွီသတင်းဌာနကို ပြောသည်။
“၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် အာဆီယံအသင်းဥက္ကဌအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကို ခန့်အပ်ရန် အသင်းရဲ့ ဆိုပြုချက်ဟာ ဒီမိုကရေစီရဖို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အထောက်အကူ ပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” “မြန်မာနိုင်ငံက ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ ဥက္ကဌတာဝန် လွှဲပြောင်းယူဖို့ ကြိုတင်စည်းကမ်းချက်ထားမယ်ဆိုရင်တာ့ အထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဥပမာ ပြောရရင် ပြောင်းလဲမှုအချို့ကို တင်ကြိုလုပ်ပြထားတာမျိုလိုမယ်လို့ ပြောကြားလိုက်သည်။
BERLIN (AFP) – No “meaningful change” has taken place since Myanmar’s first elections in 20 years in November, recently released opposition leader Aung San Suu Kyi said in comments due to be broadcast this week.
အေးလေ ။ ဘာမှမပြောင်းလဲ ဘဲ ပိုနေမြဲကျားနေမြဲ ဆိုတာ အားလုံးတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲဟာ။။။။ ဒါတောင် အစိုးရပြောင်းသွားပြီ ။ မြန်မာနိုင်ငံကြီးဘာဖြစ်တော့မှာ ညာဖြစ်တော့မှာပြောနေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်။။။ ဒီလိုတွေကိုတော့ မသိသားဆိုးရွားလေခြင်း၊ လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်သူများ လို့တောင်ခေါ်ရမလိုဖြစ်နေပြီ။။။ ထင်ရတာတော့ နောက်လဲပြောင်းလဲမှုထူးထူးခြားခြားရှိမယ်မထင်ပါဘူး။။။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အီေ၇ာ–အီရေ–ဒုံးချပ်–ဒုံးဒုံးချပ်—အာလူး–နေကြာ–ကွာစိ—မြေပဲ—ပလာတာ–နံပြား—
ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြည် သူ့ အသက် အိုး အိမ် စည်း စိမ် ကို ကာ ကွယ် စောင့် ရှောက် နေ ပါ တယ် ဆို တဲ့ မဟာ ပြည် သူ့ အချင် တော် စစ် တပ်ကြီးက သူတို့ ကို သူတို့ ကာကွယ် ဖို့ အတွက် အဓိကထား လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ပြည်လမ်း တလျောက် မှာ ရှိနေတဲ့ စစ်တပ် အ၀ိုင်းအ၀န်း မှန်သမျှ အုတ်တံတိုင်း အပြည့် အ ဖြစ် ပြောင်း လဲ လိုက်ပြီလေ။
နိုင်ငံတော်အီစိုးရရဲ့ စေတဏာ တွေကို အဲဂလိုပြောရဘူးလေ…
သံဝေဂတရား မြန်မြန်ရအောင်… ဒုက္ခဆို တာ ခဏခဏတွေ့ရအောင်…
မုန်တိုင်းမိတဲ့အခါ ငလျှင်လှုပ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အားကိုးရာဆိုတာကို နားလည်အောင်….
ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ အလုပ်များမှာ.. ပင်ပန်းမှာစိုးလို့… နေရာတကာ သူတို့ပဲ အုပ်ချုပ်ပေးနေရတာ..
သြော်…သူလည်း… မရှိမကောင်း… ရှိမကောင်း…
မပေါင်းလည်း ခက် ပေါင်းလည်းခက်ဆိုတော့ကာ…
ဒီဘ၀အတွက်တော့ ဝေးပြီကွယ်… နောင်ဘ၀အတွက်တော့ ဆုပန်ရွယ်ပေါ့ကွယ်…
အားလုံးကို ကလိမ့်စေ့ငြမ်းဆင်ပြီး နိုင်နိုင်အောင်လုပ်သွားတာတော့လူတိုင်းသိပါတယ်။ခုနည်းနည်းတော့ ကောင်းတာလေးတွေလုပ်ပြလာနေပါပီ။ဘယ်လောက်ထိခံမယ်။ဘယ်ချိန်မှာတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်းကအဖြေကောင်းထွက်မယ် မသေချာပေမယ့်. နည်းနည်းတော့ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုရမှာပါ။စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။သူ ဘယ်လို့ လှည့်မယ့်မျက်လည့်ဆိုတာကို
ခုလောလောဆယ်တော့ ဂျာနယ်တွေမှာ နဲနဲလွတ်လပ်လာတယ်…။ စာပေဟောပြောပွဲတွေမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဟောပြောလာတာတွေ့ရတယ်…။ အရင်လို တားတာတွေ ဘာတွေ မရှိတော့ဘူးလားလို့ ကျန်တာတွေတော့ သိပ်မသိဘူး…။
တချို့ဂျာနယ်တွေ စာပေစိစစ်ရေးတင်စရာမလိုပဲ ထုတ်ဝေခွင့်တွေရလာပြီ
(ဒါကို အခွင့်ယူလုပ်စားကြတဲ့ ဂျာနယ်တွေလည်း ရှိတာပေ့ါ)
စာပေဟောပြောပွဲ လွတ်လပ်တာတော့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်
စာရေးဆရာနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရတာဆိုတော့ ပိုထိရောက်တယ်လို့ ထင်တယ်
မယားပါသား အိမ်ခဏကြည့်ထား အဲ့ဒါအပြောင်အလဲဗျား………
မပြောင်းလဲပါကွာ နင်ရယ်ပြန်စဉ်းစား မြန်မြန်ကယ်လိုက်တော့ တိုင်းပြည်ကို